Etu esi wụnye Windows 10 na USB | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi ewunye Windows 10 site na USB
Ụlọ Ignatius | | Nkuzi, Windows
Windows 10 abụrụla nke ọma sistemu arụmọrụ kachasị mma nke Microsoft malitere n'afọ ndị na-adịbeghị anya n’agaghị echefu ma Windows XP ma Windows 7. Mgbe Windows 8.x ọdịda, Microsoft maara otu esi amata njehie ya wee were Windows 7 na Windows 8.x kachasị (ee, o nwere ihe dị mma).
N’afọ mbụ nke mbido ya, Microsoft chọrọ ka ndị ọrụ were ngwa ngwa were ụdị ọhụụ a nke Windows wee nye ndị ọrụ niile ohere ịwụnye ya na kọmpụta ha na - akwụghị ụgwọ ọ bụla site na iji ikikere ha nwere maka Windows 7 na Windows 8.x. Ọ bụrụ n’echiche na oge eruola ịnwe ọ versionụ ọhụụ a, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị esi arụnye Windows 10 na USB. Anyị hụrụ n'oge na-adịbeghị anya budata Windows 10 n'efu na Spanish 64 bits zuru ezu.
Ọ bụ eziokwu na oge amara agafeela ma taa, anyị ga-achọpụta ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ Windows 10, oge ụfọdụ ụlọ ọrụ Redmond na-enye nwa oge ohere deba aha Windows 10 kọmputa site na iji nọmba serị Windows 7 / Windows 8.x N’ụzọ ezi uche dị na ya, Microsoft anaghị akpọsa ọkwa nnweta a ka ọ bụrụ naanị ihe anyị nwere ike ime bụ ilekwasị anya na blọọgụ anyị kachasị amasị anyị na mgbakwunye na ịnwale oge ọ bụla ma ọ bụrụ na Microsoft nwere emeghe ụzọ.
1 Budata Windows 10
2 Wụnye Windows 10
3 Ego ole ka Windows 10 na-efu
Budata Windows 10
N'adịghị ka afọ ndị gara aga, nke naanị nhọrọ ịwụnye Windows bụ ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ nbudata dị iche, Microsoft na-enye anyị weebụsaịtị nke anyị nwere ike ozugbo ibudata ISO, ma 32-bit na 64-bit, iji mesịa detuo ya na DVD ma gaa n'ihu na ntinye.
Ọ na-enyekwa anyị ohere budata Windows 10 installer Site na nke a, anyị nwere ike ịmepụta USB ma ọ bụ DVD dị mkpa iji wụnye Windows 10 na kọmputa anyị. Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọtụtụ akụrụngwa ugbu a anaghị agụnye draịvụ DVD n'ihi nsogbu ohere iji nye ngwa dị ọnụ ala, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị otu esi arụ usoro nrụnye na USB, USB nke ga-enwerịrị opekempe ikike nke 8 GB.
Kọmputa niile dị ugbu a, tinyere ụfọdụ ndị okenye, na-enye anyị ohere, site na BIOS, iji gbanwee ụkpụrụ buut, iji guzobe nke mbanye kọmputa anyị ga-agụ na mbụ ozugbo ọ malitere. Ka kọmputa wee buo, ọ ga-enwerịrị sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ihe nrụnye, na uzọ ọzọ gaa na esote draịva edoziri na buut. Na ngalaba na-esote anyị na-egosi gị otu esi eme usoro a.
Nke mbu, anyi aghaghi isi na Weebụ ebe Microsoft na-enye anyị ohere ibudata Windows 10. Nke mbụ, anyị ga-edozi ma asụsụ nke ụdị anyị chọrọ ịwụnye na nsụgharị: 32 ma ọ bụ 64 ibe n'ibe. Ọ bụ ezie na akụrụngwa anyị nwere ike ịhụ ihe ochie, ọ dị mma mgbe niile ịwụnye ụdị 64-bit, ebe ọ ga-enye anyị ohere iji ngwaike niile dị na akụrụngwa anyị. Ọ bụrụ na anyị họrọ ụdị 32-bit, ọ ga-abụ na ọtụtụ ngwa agaghị arụ ọrụ, yabụ belụsọ na anyị doro anya banyere ojiji anyị ga-enye ya, m bet team A na-atụ aro mgbe niile ịwụnye ụdị 64-bit.
Na-esote, pịa n'ihu wee pịa Download installer. Ozugbo ebudatara ya, anyị na-eme ya. Ke akpa itie ọ ga-ajụ anyị ma Achọrọ mAnyị ga-emerịrị usoro ntinye ma ọ bụ melite akụrụngwa ahụ ebe anyi na agba oso installer. Anyị na-ahọrọ nhọrọ nke mbụ, fanye USB na kọmputa ma họrọ eriri USB ebe a ga-emepụta Windows 10 installer.
N'oge ahụ usoro nbudata nke ụdị Windows 10 anyị họọrọ ga-amalite ma emesịa, na-enweghị anyị itinye aka, a ga-ekepụta bootable iji nwee ike wụnye Windows 10 na kọmputa anyị site na eriri USB.
Wụnye Windows 10
Ozugbo anyị ebudatara ma mepụta USB nke anyị ga-etinye Windows 10, anyị ga-emerịrị a ụdị data niile anyị echekwara na akụrụngwa anyị. Ọ bụ ezie na enwere ike ịtụle ụdị nke Windows gara aga, a naghị atụ aro ya, ebe Windows 10 agaghị arụ ọrụ dịka a tụrụ anya ya.
Ọzọkwa, ka oge na-aga anyị ga-achọ ihichapụ ụdị nke gara aga n'ihi na anyị akwụsịla iji ya, naanị otu ụzọ ị ga-esi mee ya bụ ịkpụzi draịvụ ike. Ozugbo anyị mechara nkwado ndabere, anyị ga- fanye USB na kọmputa ma gbanyụọ ya.
Ozugbo anyị bidoro kọmputa ahụ, tupu ọ bido ibudata sistemụ arụmọrụ dị ugbu a, anyị ga-enwerịrị usoro BIOS iji gbanwee mpaghara buut. Iji mee nke a, anyị ga-amarịrị onye bụ isi ihe na-enye anyị ohere ịbanye na ya. Ihe niile dabere na motherboard, mana n'ọtụtụ kọmputa ọ bụ igodo F2, na ndị ọzọ Del key, na ndị ọzọ F12 isi ... Ozi a pụtara sekọnd mgbe ịmalite kọmputa anyị tupu ịmalite Ibu Ibu sistemụ.
Ozugbo anyị nọ na BIOS, anyị ga-aga buut. Ndị na-esonụ ga-egosi na nye iwu ka komputa choro ichota sistemu eji aru oru ma ọ bụ echichi nkeji. Iji họrọ USB drive ebe ihe nrụnye dị, anyị ga-pịa na draịva ahụ ma debe ya n'ọnọdụ mbụ.
Ozugbo anyị guzobere na ọ bụ Windows 10 bootable USB, nkeji nke anyị ga-amalite kọmputa anyị, anyị na-echekwa mgbanwe emere na BIOS na kọmputa ga-akpaghị aka Malitegharịa ekwentị na-etinye mgbanwe. Site n'oge ahụ, mgbe anyị malitere kọmputa anyị, ọ ga-abụ Windows 10 USB installer na-amalite usoro nrụnye.
Nke mbụ, anyị ga-edozi asụsụ nke Windows 10 nwụnye anyị ga-arụ. N'adịghị ka nsụgharị ndị gara aga, ozugbo anyị mechara nwụnye, anyị nwere ike ịgbanwe asụsụ maka ọzọ na enweghị nsogbu ọ bụla. (Gbanwee asụsụ Windows 10)
Ọzọ, onye nrụnye ga-ajụ anyị ma anyị chọrọ ịrụ nhicha dị ọcha ma ọ bụ na anyị chọrọ idobe sistemụ arụmọrụ gara aga. N'okwu a, dịka m kwuru n'elu, ọ ka mma ịrụ nrụnye dị ọcha.
Ọzọ, ọ ga-ajụ anyị ka anyị họrọ na nke unit anyị chọrọ iji wụnye ya. Anyị ga-ahọrọrịrị isi draịva nke ụdị Windows gara aga dị wee pịa usoro iji kpochapụ akara ọ bụla nwere ike ịdị na kọmputa.
N'ikpeazụ, pịa na-esote na installer ga-amalite idetuo faịlụ dị mkpa iji rụọ nwụnye. Ozugbo kọmputa malitegharia, Windows 10 ka rụchara nwụnye, usoro nke nwere ike iwe obere oge ma ọ bụ obere dabere na ụdị draịvụ kọmputa anyị nwere na ọsọ kọmputa.
Tupu ịchọọ nwụnye, Windows 10 ga - eduzi anyị n'ọtụtụ usoro ka ọ bụrụ ka anyị melite oyiri nke Windows 10 anyị n'ụzọ kacha mma maka mkpa anyị.
Ego ole ka Windows 10 na-efu
Windows 10 bụ dị na nsụgharị abụọ: Homelọ na Pro. The Home version na ọnụ na 145 euro mgbe Pro version, na price bụ 259 euro. Ọnụahịa ndị a nwere ike iyi obere oke ma e jiri ya tụnyere ụdị nke Windows 10 gara aga mana ha bụ ọnụahịa gọọmentị nke Windows 10 na Storelọ Ahịa Microsoft.
Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta ikikere ziri ezi nke Windows 10 Home ma ọ bụ Windows 1o Pro, anyị nwere ike chigharia AmazonNa-aga n'ihu, ebe anyị nwere ike nweta ikikere maka nsụgharị abụọ maka ihe karịrị ọkara ego Microsoft na-ajụ anyị na weebụsaịtị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu esi ewunye Windows 10 site na USB
TheAwards 2018 dị ebe a: Onyinye maka ngwa kacha mma na egwuregwu na Spain
Esi ewepu Internet Explorer